Sitelock: Ilaali Boggaaga WordPress iyo booqdayaasha | Martech Zone
Sitelock: Ilaali Boggaaga WordPress iyo booqdayaasha
Arbacada, Agoosto 15, 2018 Douglas Karr
Amniga WordPress waa mid ka mid ah waxyaabaha inta badan laga tago illaa goor dambe. Qiyaastii rubuc rubuc ayaa la iga codsaday inaan ka caawiyo nadiifinta goob la weeraray. Weeraradu waxay dhacaan maxaa yeelay WordPress ayaa laga tagay iyada oo aan la cusbooneysiinin waxaana ka faa'iideystay dalool ammaan oo la yaqaan Ama, badanaa, waa mawduuc si liidata u horumarsan ama shey aan la cusbooneysiin.
Waxaa jira tan oo ah dhiirigelinno kala duwan oo loogu talagalay jabsiga WordPress, oo ay ku jiraan helitaanka isticmaalaha iyo cinwaanada emaylka, gelinta backlinks si aad u khiyaameyso makiinadaha raadinta, ama lagugu durayo furin kaxaysa taraafikada goobaha aan sumacadda lahayn. Jabsadayaasha horumarinaya tan runti waxay qabtaan shaqo qarxin ah oo lagu burburinayo bartaada, sidoo kale. Waxay ku rakibayaan qoraallo ku rakibaya qoraallo… markaa waad nadiifinaysaa hal feyl oo daqiiqado yar ka dib ayuu mar kale ku dhacayaa.
Kaaga darane, markii bartaada uu cudurku ku dhacay oo aadan ka war qabin - bartaada ayaa isla markiiba ka heli doonta liiska madow ee daalacayaasha iyo makiinadaha wax raadinta ay isticmaalaan si looga fogaado inay kuu soo diraan dadka ku soo booqanaya.
Dhowr goobood oo aan nadiifiyey ayaa si bahalnimo ah ugu dhacay cudurka, waxayna iga rabeen inaan si toos ah ugala baxo goobta, anigoo dib uga qoraya feylasha muhiimka ah ee WordPress, ka dibna safafka ugu galaya mowduucyada, fiilooyinka iyo waxyaabaha dhabta ah ee ku keydsan xogta si loo ogaado khayaanada. Waa xanuun badan yahay.
Heling jabsiga on WordPress waa laga hortagi karaa
Ka baxsan dayactirka WordPress, qalabkaaga, iyo mawduucyada qoraalkii ugu dambeeyay, waxaa sidoo kale jira aalado waaweyn oo halkaas ku yaal si ay kuu ilaaliyaan nabadgelyada. Raadinta goobta, Hogaamiyaha dariiqa ku saleysan, xalalka amniga ee shabakadaha oo dhameystiran, waxay u jeesatay dhanka WordPress waxayna sameysay suugaan buuxda oo ah ikhtiyaarrada ganacsiyada yaryar, kuwa dhexdhexaadka ah iyo kuwa ganacsiga si loo ilaaliyo boggooda WordPress. Waxay bixiyaan hay'ad, shirkad iyo xitaa xalal badan.
Eeg baakadaha WordPress ee Sitelock
Bixinta WordPress ee WordPress waxaa ka mid ah astaamaha iyo adeegyada soo socda:
Baadhitaanka goobta iswada
Ka saarida fure otomaatig ah
Iskaan iskaanka lagu ogaado
Farmashiyaha iswada WordPress
Nadiifinta keydka keydka macluumaadka
Intaa waxaa sii dheer, Sitelock wuxuu leeyahay astaamo aad u wanaagsan oo lagu wanaajinayo boggaaga WordPress, oo ay ku jiraan:
Xannibaadda xun ee xun
Xaraynta taraafikada ee la beddeli karo
Xayiraadda weerarka macluumaadka
Markay wax khaldamaan, adeegyada khabiir ee Sitelock waxay ku siin karaan dayactir deg deg ah jabinta iyo ka saarista liiska madow. Iyo - si ka duwan xalka kale ee jira - Sitelock wuxuu leeyahay 24/7/365 taageero ay heli karaan dhammaan macaamiisheeda!
Daah-: Waxaan nahay shirkad ka tirsan Sitelock oo aan kor u qaadno adeegyadeeda.
Afarta Astaamood ee Wadajirka ah ee Shirkadaha Beddelay Suuqgeynta Dijital ah